Fanolorana ny andro – Page 7 – Tambajotram-Pivavahan'ny Papa Maneran-tany – MADAGASIKARA
Tag: Fanolorana ny andro
Fanolorana ny andro : ireo fangatahana ho an’ny volana martsa 2016
Ireo fangatahana ho an’ny volana martsa 2016 Mba hahita fanohanana araka izay ilaina ireo fianakaviana sahirana ary mba hahita tontolo hahafahany mitombo sy mivelatra ny ankizy. Ary noho ny vavaka tsy an-kijanona ataon’ny Eglizy dia mba hanana hery manoloana ny fitsapana sy tsy haneho fivadihana amin’ny Evanjely ireo kristianina voailikilika sy enjehina noho ny finoany.
Fanolorana ny andro
Horonan-tsary : manentana antsika hiaro ny zava-boaary ny Papa Fransoa
Indro ary ny horonan-tsary hahafahantsika manohy ny fiarahana mivavaka amin’ny Ray masina Fransoa. An-tapitrany ireo olona nijery ilay horonan-tsary napariaka tamin’ny volana janoary ka isaorana antsika hatrany ny fampielezana ny vavaka fanolorana ny andro.
Fanolorana ny andro : ireo fangatahana ho an’ny febroary 2016
Mba ho voakolokolo amin’ny alalan’ny fambolena sy ny fiarovana azy ny zava-boaary izay fanomezana maimaim-poana, ho fitsinjovana ireo taranaka ho avy. Ary hitombo hatrany ny fahafahana mifampiresaka sy mihaona eo amin’ny finoana kristianina sy ireo vahoaka any Azia.
Jereo ny horonan-tsary iarahanao mivavaka amin’i Papa Fransoa
Mihavao manaraka ny toetr’andro ny fanapariahana iireo fangatahana ampanaovin’ny Ray masina amin’ny vavaka fanolorana ny andro. Ny Papa Fransoa mihitsy no hanandratra vavaka ary hanentana ny olon-drehetra hiombom-bavaka amin’ny alalan’ny horonan-tsary. Nanomboka tamin’ity volana janoary ity io ezaka vaovao io. Manentana amin’ny fiteny esipaniôla ny Ray masina Fransoa ary mipoitra eo ambany ny dikan-teny. Fiteny …
Fanolorana ny andro : fangatahana ho an’ny janoary 2016
Fanolorana ny andro : fangatahana ho an’ny janoary 2016 Mba hitondra fiadanana sy fahamarinana ny fifanakalozan-kevitra ataon’ny lehilahy sy ny vehivavy amin’ny antokom-pivavahana samihafa. Ary ho voasoroky ny fifampiresahana sy ny fitiavanamana kristianina noho ny fahasoavana avy amin’ny Fanahy masina ny fizarazarana eo amin’ny samy kristianina.
Fanolorana ny andro : ireo fangatahana ho an’ny desambra 2015
TSATILAKRI, Ireto ny fangatahana ho an’ny volana desambra 2015 : – Mba ho afaka hanandrana ny famindrampon’Andriamanitra izay tsy mitsahatra mamela heloka isika ; – Ary hahita fanantenanana amin’ny fahaterahan’i Jesoa ny fianakaviana, indrindra ireo fianakaviana mijaly. Ankoatry ny vavaka ataontsika tsirairay dia entanina isika ho amin’ny fiombonam-bavaka isaky ny zoma voalohany.
AFAFI, Fanolorana ny andro, vavaka
Fanolorana ny andro : fangatahana ho an’ny septambra 2015
De Admin dans la catégorie Vaovao, Vavaka
TSATILAKRI ! Ireto ny fangatahana miaraka amin’ny vavaka fanolorana ny andro amin’ity volana septambra ity : – Mba hitombo hatrany ny fahafahana mampiofana sy manome asa ny tanora rehetra ; – Ary hijoro ho vavolombelon’ny finoana izay toriany ireo katekista, ka ho hita taratra eo amin’ny fiainany andavanandro izany.
Fanolorana ny andro : fangatahana ho an’ny aogositra 2015
Ireo olona sahirana ara-pivelomana sy ailiky ny fiaraha-monina no entina am-bavaka amin’ity volona aogositra ity : – Mba hirotsaka an-kalalaham-po hanompo ireo olona marefo ara-pivelomana ny olona rehetra manolotena hanao asa an-tsitrapo. – Ary hiendaka amin’ny tenantsika isika ka hanakaiky kokoa ireo olona izay atao anjorombala sy ihatahan’ny fiaraha-monina.
Fanolorana ny andro : fangatahana ho an’ny jolay 2015
Ny fandraisana andraikitra ara-pôlitika sy ireo kristianina any Amerika Latinina no entina am-bavaka amin’ity volana jolay ity : – Mba hiainana eo amin’ny ambaratonga rehetra ho toy ny endrim-pitiava-namana ambony ny fandraisana andraikitra ara-pôlitika. – Ary ho afaka hijoro ho vavolombelon’ny fitiavana amin’ireo mahantra sy hanorina fiaraha-monina anjakan’ny firahalahiana ireo kristianina any Amerika Latinina manoloana …